NOOCYADA UGU FIICAN EE ABUURKA TUFAAXA EE DHUL FURAN: NOOCYADA LEH SHARAXAAD IYO SAWIRO, SIDA FREEDOM, GOAT DEREZA, ALPHA, SNOWBALL, GOODMAN, WARRANTY, VINSON, MALIMBA - BEER CAGAARAN
Tilmaanta iyo sawirada noocyada ugu fiican ee tayo fiican. Talooyinka lagu dooranayo abuurka beeritaanka beerta furan
Joonisku waa khudaar caano leh oo caafimaad leh, oo ay ku jiraan cuntada ilmaha, tusaale ahaan Gerber. Qurxinta beertu waxay xaqiiqo ahaan leedahay midabkiisa gaarka ah ee sii kordhaya, laakiin iyaga waa in ay adag tahay.
Madaxa tuunbada yar yar waa kaydka dhabta ah ee ugu muhiimsan oo si fudud loo cuno. Cunto nafaqo leh ayaa saldhig u ah cuntada cuntada, sidoo kale waa mid aan lagama maarmaan ahayn mid ka mid ah cunnooyinka ugu horreeya ee carruurta yaryar.
Si aan u niyad jabin beergooyska, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado oo kaliya ku saabsan daryeelka saxda ah, laakiin sidoo kale in ay awoodaan in ay doortaan noocyada kala duwan ee noocyo ugu haboon.
Muhiimada xulashada saxda ah ee miraha
Si loo ogaado noocyada tayo fiican ee tayo fiican, waa in wax laga beddelo qodobo badan. Tusaale ahaan, xaaladaha cimilada ee gobollada koonfureed waa mid gaar ah, taas oo macnaheedu yahay noocyada ku habboon iyaga ayaa laga yaabaa inaanay dhalin dalal waqooyiga ah. Iyo sidoo kale. Doorashada kala duwan ayaa saameyn ku leh halabuurka ciidda, dhererka maalinta, xaddiga roobabka, iyo nidaamka heerkulka. iyo wixii la mid ah
Marka xulashada noocyo tayo leh, ugu horreyntii waa lagama maarmaan in la tixgeliyo xaaladda gobolka, xaaladaha cimilada. Caqabado leh noocyo kala duwan oo ciid ah ayaa u baahan doona dadaal badan oo la gooyey ama carrada acidic oo laga yaabo inay niyad jabaan dalagga. Goobtan oo kale, noocyo badan oo ku haboon oo aan u baahnayn bacriminta.
Intaa waxaa dheer, Ujeedada koritaanka waa muhiim. Haddii kaabajka loogu talagalay iibka, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa noocyada ilaaliya bandhigga inta lagu jiro gaadiidka. Xilliga qaboojinta iyo ilaalinta waxay ku haboontahay kuwa si sahlan loogu qaybiyo inflorescences.
Noocyada ugu caansan waxaa loogu talagalay dhul furan oo leh boogta hore. Tilmaamaha Tani waxay ku haboon tahay in ay sii kordhaan aagga cimilada oo dhan waxayna hubisaa dhalidda.
Gobollada koonfureed, noocyada kala duwan ee bislaanshaha waa ku habboon yihiin, oo ay ku jiraan kuwa dambe, laakiin halkan waa inaad fiiro gaar ah u adkaysiga kulaylka ee noocyada.
Marka aad dooranayso wax beerashada waa in ay taxaddaraan qaar ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan:
abuurka iyo Beelaha oo la gooyey gobolka beerto ayaa noqon doona doorashada ugu wanaagsan;
loogu talagalay noocyo laga soo saaro tarbiyo shisheeye, taariikhda beerto waxay u baahan doontaa in la beddelo aagga cimilada ku haboon, waqtigaas Bisaylkiisa, sidaas darteed, ayaa sidoo kale isbedelaya;
Si aad u hesho goosan la goostay, waxaad dhali kartaa noocyo kala duwan oo ku kala duwan xawaaraha dhirta.
Abuurka miraha beeraha waxaa laga iibsan karaa dukaamo khaas ah iyo waaxyo, iyo sidoo kale bandhigyo kala duwan iyo bandhigyo jihada beeraha. Intaa waxa dheer, waxaa jira tiro badan oo dukaamada internetka ah oo alaabta badeecada lagu dalbado internetka la geyn doono gurigaaga.
Caawimaad! Marka xulashada abuurka, mid waa inuu dareenka bixinayaa maaha oo kaliya tilmaanta noocyada kala duwan, laakiin sidoo kale loo-soo-saaraha. Waxaa wanaagsan in la doorto shirkadaha si fiican loo yaqaan: Aelita, Gavrish, SeDek, Bejo Zaden, Klaus iyo kuwo kale.
Calaamadaha isku dhafan noocyo qudaar ah
Noocyo dhirta ayaa lagu kala gooyay heerkii Bisaylkiisa:
horaantii hore: Solis F1, Livingstone F1, Cool F1;
hore: Amerigo F1, Alpha, Cortes F1, Pioneer F1, Snowball F1;
Baaskiil dhexdhexaad ah: Globe globe, Robert, Purple, Movir-74, Snowdrift;
Dabadeed: Universal, Konsista, Sochi, weynaha weyn.
Aan tayo lahayn xulasho shisheeye, inkastoo ay is khilaafsan tahay xaaladaha cimilada ee kobaca, ayaa cadeeyay in Russia. Abuurka ugu wanaagsan Europe:
Doorashada Nolosha: Vinson F1, Goodman F1, Opal, Fargo F1, Fremont F1;
Doorashada Jarmalka: Alpha, Berdergruss, Yako.
Gobollada beertu waxay leeyihiin qaabka ciidda, sidaas markaad dooranayso noocyo kala duwan, waa inaad u fiirsataa. Waxaa lagugula taliyay in la dhigo:
gobolka Moscow: Alpha, Gribovskaya 1355, Skorospelka, Goodman;
ee Ural: Albaabka Cadaanka, Dachnitsa, Laba Walaalo;
ee Siberia: Bambo Emerald, Bambo Qaran, Coquette.
Gaar ahaan caan ah waa Beelaha, sida:
Qeexida noocyada leh magacyada iyo sawirada
Goat Dereza (Egoza)
Waxyaabaha hore u bislaaday. Caleemaha cagaaran-cagaaran ee cabbirka dhexdhexaad ah, oo leh dufan yar. Madaxa waa cufan, dhexdhexaad dhexdhexaad ah, miisaanka celceliska waa qiyaas ahaan 800 garaam. Noocaha kobcitaanka Dereza Dereza uma baahna daryeel gaar ah.
ugxan wanaagsan oo madax ah, iska caabiya qabow;
dhalidda sare leh Bisaylkiisa;
uu leeyahay dhadhan wanaagsan, ku habboon ilaalinta iyo kaydinta;
loo isticmaalo aagag kala duwan.
Snowball 123 (Snowball)
Sredneranny, wuxuu soo koobay madaxyo isku dhejisan oo midab cad ah oo leh cufan cufan, oo miisaamaya min 500 ilaa 1500 gr.
wuxuu u baahan yahay boron iyo quusto timo quudin ah;
wuxuu ilaaliyaa kaydinta dheer, oo ay ku jirto muuqaalka la qaboojiyey.
Kala duwanaanta kala duwan ee Bisaylkiisa hore, celceliska miisaanka madaxa 1500 GR, sare-u-soo saarka.
cad cad oo cad oo madaxa cad;
iska caabida cudurada waaweyn.
Beelaha jiilka kowaad, mass ee madaxa ka 1.5 illaa 3 kg, caleemaha germin yihiin maqan, dhadhan wanaagsan.
korriin midaysan, kobaca xooggan;
awooda lagu ilaaliyo muuqaalka inta lagu jiro gaadiidka iyo kaydinta;
waxay u baahan tahay quudinta molybdenum.
Madaxa cufan ee culus oo culeyskiisu yahay qiyaastii 1 kg, caleemaha nuska qorraxda, oo si wanaagsan u daboolaya madaxa, ayaa lagu kori karaa gobollo kala duwan.
Awoodda iyo tabar darrada:
aaladda wanaagsan ee inflorescences;
dalbashada daryeelka gaarka ah: waraabinta, ka kooban ciidda, dabacsan, quudinta;
ayaa si liidata ugu kora carrada acidic.
Caleemaha waa weyn, midab buluug-cagaaran, dhirtu waxay gaartaa dhererka 1 m, celceliska miisaanka culus waa 0.5 kg. Midabka madaxa waa cagaar.
Tilmaamaha oo la mid ah brokoli;
dabeecadda qadhaadhka tufaaxa maqnaashaha, dhadhanka ayaa ah cows-creamy;
qaabka inflorescences wuxuu la mid yahay isbaarada jaban, oo ka kooban tiro badan oo ah burooyinka foomkan;
ciidda la doorbidayo waa carrada madow;
sii kordhaya Romanesco waxay u baahan tahay quudin waqti go'an iyo daryeel joogto ah;
waayo kaydinta waa in la qaboojiyaa.
Kala duwan dhexdhexaad ah, miisaanka madaxa ka 1 ilaa 1.5 kg. Xaqiijinta quudinta. Baahida loo qabo shaleecada. Uma dulqaadanin ciidda acidic.
u dulqaadanayaa gaadiidka iyo kaydinta;
kulaylka adkaysi u leh nidaamka xidid adag;
Waxay leedahay iska caabin aad u sareeya ee cudur iyo waxyeelo microbial.
Caanaha hore, madax cad ama huruud ah oo leh shaar qabow, miisaankeedu yahay 0.5 ilaa 1.2 kg.
u adkaysata bakteeriyada;
ku habboon beerashada aqalka dhirta lagu koriyo iyo beerta furan;
adkaysi u leh tsvetushnosti, burburin iyo kala goynta madaxa;
oo lagu habeeyey xaaladaha Siberia iyo Bariga Fog.
Gibrad leh caleemo midabka cawl-cagaaran, oo si adag u daboolaya madaxa gabi ahaanba cad. Isugeynta miisaanka ayaa gaareysa 2.5 kg. Carrada ayaa jecel loamy, sandiga hoose.
adkaysi u dhibcid deg deg ah heerkulka;
ma ka cabsanayaan qoyaan sii kordhaya, xiliyada roobaadka;
waxay u dulqaadataa dhaxan guga;
ku haboon inay sii kordhaan aagagga cimilada ee kala duwan.
Fasalka dhexe, caleemo qiyaasta celceliska, madax madaxiisu yahay, miisaankeedu yahay ilaa 2 kg, oo sare u qaadaya.
ilaalinta bandhigga inta lagu jiro gaadiidka;
wax qabad la'aanta farsamada beeraha.
Noocyada kala duwan ee loo furo dhulka. Caleemaha waa cagaar madow, oo leh midab cawl, oo daboolaya madaxa midab barafka cad. Miisaanka madaxa 1.5 - 1.8 kg. Dhexdhexaadin hore loogu taliyey aag kasta oo cimilada.
ku haboon ilaalinta iyo qaboojinta;
uma baahna hirgalinta Bacriminta nitrogen dheeraad ah;
waxay ka soo horjeedaa kala duwanaanshaha heerarka kala duwan ee heerkulka, qoyaan, isbedelka cimilada.
Madaxu waa mid yaryar, cadaan iyo jaale ah, miisaankiisu yahay 0.4 ilaa 1.4 kg. Waxaa lagu koray dhulka furan iyo koriyo. Dhadhanka ayaa sarreeya.
Astaamaha noocyo kala duwan:
adkaysi u ah inuu burburo;
la qaadi karo;
ku habboon diyaarinta meelaha banaan;
kuleylka dulqaad leh;
Waxaa lagula taliyay gobollo kala duwan, oo ay ku jiraan Siberia iyo Ural.
Kala duwan oo hore, madaxa oo cad oo leh miisaan qiyaastii 2 kg, si fiican u xiran caleemaha, uma baahna xayeysiis.
caabbinta sare ee heerkulka kulul;
waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah iyo ciid wanaagsan;
ilaalinta bandhigga inta lagu jiro gaadiidka.
Dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo ah dhexdhexaad ah dhul beereedka, madaxa ayaa si fiican u ilaaliya caleemo, wuxuu gaaraa miisaan 2.5 kg, ubaxyada waa cufan.
koray degaannada cimilada ee kala duwan;
ku habboon qaboojinta, sababtoo ah si fudud u faafo ubaxyada;
ma ka cabsanaya dhagxaanta.
Kala soocid qaan-celinta kala-duwan ee soo-saarka. Madaxa ayaa si fiican loogu daboolay caleemaha wuxuuna gaaraa miisaanka 2.5 kg.
u adkaysata heerkulka sare;
ku habboon nooc kasta oo wax qabad ah;
ha ka baqin dhaxan;
beerista suurtagalka ah ee gobollada kala duwan;
Diidmada saaridda ciidda iyo daryeelka.
Kala-duwanaanta kala-dabiiciga ah ee madaxa cufan ee 0.5 ilaa 1 kg, dhadhan fiican.
ku haboon dhammaan noocyada wax soo saarka;
wuxuu u baahan yahay ciid wanaagsan.
Marka la eego tirada khilaafaadka sababtoo ah walxaha kiimikada ee sheyga, isticmaalka tayo-saaridda waxaa lagu talinayaa dadka da'doodu kala duwan tahay. On our site waxaad ka heli doontaa cuntada badan oo ka soo khudradda this maalin kasta, fursadaha suxuunta ee haweenka uurka leh iyo nuujinaya, iyo sidoo kale nafaqo faa'iido leh carruurta.
Qaar badan oo noocyo tayo leh ayaa kuu oggolaanaya inaad dooratid ikhtiyaarka ugu fiican ee ugu dhow ee la wadaago dhammaan shuruudaha. Si taxadar leh u darso sharaxaadda, mid si sahlan ayuu u heli karaa, tusaale ahaan, noocyada hore ee ka yimid Holland wuxuu leeyahay sifooyin wanaagsan oo loogu talagalay isticmaalka ilaalinta, taas oo ku farxi doonta dalagga mana u baahan doono daryeel khaas ah ama shuruudo gaar ah oo aan sifeynin aagga beeritaanka.